I-Porn ihlotshaniswa nokwanda kobugebengu bobulili | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya The Law Ukuphakama kobugebengu bobulili
Izinga lobugebengu bobulili lisezingeni eliphezulu emlandweni eScotland lapho abashushisi bebika ukuthi ubugebengu bobulili bubalelwa ku-80% wecala elibhekene neNkantolo eNkulu yezokuQinisa.
Ijaji eliphakeme kunazo zonke eNgilandi naseWales, iThe Lord Chief Justice, iNkosi uThomas of Cwmgiedd, uthe amacala obugebengu obubhekene nocansi ayaqhubeka futhi awakwazi ukuchazwa nje ukuthi amacala omlando ayavela. "Ezinye zezithombe zobulili ezingcolile azikholelwa kulokho abakubonisayo futhi ngokungangabazeki zithinta abantu." Nakuba ayebhekisela emthelela omubi walokho okushiwo abahluleli, ngokufanayo kusebenza kubantu abaningi abanjalo ividiyo ikhombisa ukubukela imali ebalulekile.
Le vidiyo ikhombisa uDave Thompson, oyiChief Constable wamaPhoyisa aseWest Midlands, evela phambi kweKomidi lezaseKhaya ePhalamende ngomhlaka 25 Okthoba 2017. Ukhuluma ngendlela ashaqeke ngayo ngocansi izinto amaphoyisa akhe azithola amadoda ase-UK afuna iwebhu emnyama. (I-Independent, imizuzwana engama-28)
I-porn esemthethweni yibhizinisi elikhulu kakhulu. Ukutholakala okulungele kokutholwa okungabizi futhi okulula kwe-inthanethi ye-porn kanye nokungaziwa kwayo kuye kwenza ama-smartphones abe 'okufanele abe nakho' futhi abe nokuzijabulisa okulula.
Ama-Brits amaningi abukela i-porn yabo kuma-Smartphones kunama-computer. I-62% yabantwana abaneminyaka engu-12-15 banezi-Smartphones ngokusho kombiko we-2013 Ofcom.
Ubuchopho obuwumphumela wokusebenzisa kabi izithombe ezingcolile ezingcolile ze-intanethi, ikakhulukazi ebuchosheni obuncane bentsha, kungaholela ekuziphatheni okuphoqelekile nokwenza okungaqondakali okungabangela icala lobulili.
Ngisho nangaphandle kokuhlukunyezwa ngokocansi, umuntu angagwetshwa ngobugebengu obubi. Ngokwesibonelo, omunye udumo wesilisa omncane, sizombiza ngokuthi uBob, utholakale enecala lokuthola izithombe zobulili ezingcolile zezingane ngenxa yenani lezithombe ezingenasithunzi ayenaso efonini yakhe ehlakaniphile. Lawa yizithombe ezithunyelwe kuye nge-Facebook nakweminye imidiya yezenhlalakahle yizingane ezibeka njengabasha abasebasha. Ngisho noma engazange ahlangane namantombazane, ukuhlala yedwa kwakwanele ukuba afakwe icala.
Imiphumela yokugwetshwa kwecala lobulili njengokwakheka izithombe ezingcolile zobulili kuzoba cishe isaziso kwiRejista yabalaleli bezocansi. Kusho ukuthini lokhu ekusebenzeni umuntu ofana noBob?
Kusho ukuthi uzolahlekelwa umsebenzi wakhe ophakeme, umsebenzi ozuzayo. Ngeke akwazi ukuthola i-visa ukuthatha intombi yakhe eDisneyland e-US noma kwenye indawo ngaphandle. Uma kamuva beba nezingane zabo, uzobe eseceleni ukubhekwa ngokuqhubekayo ngabasebenzi bezenhlalakahle ngisho nangemva kokuba igama lakhe livela kwiRejista yabalaleli bezocansi. Konke lokhu kwenzeke ngenxa yokungakwazi kwakhe umthetho futhi mhlawumbe ezinye izinto ezingenangqondo ezitholakala emncintiswaneni, intsha ye-wannabe i-WAGs inqume ukuba nenhlanganyelo yokudumisa.
Ukwenza abantu abasha bazi lezi zingozi namuhla kubalulekile. Akuyona nje 'ingozi engaziwa' futhi ukwesaba ukulungiswa kwe-intanethi okumele abanakekeli badinga ukuqapha, kodwa ukulimaza izingane zabo ezizibangela ngokungazi nje ukuxosha izinjabulo kwi-smartphone yabo, nokwenza lokho okubonakalayo 'wonke umuntu' . Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zithinta ubuchopho ngokuhluke kakhulu kumabonakude we-TV noma ama-DVD nama-DVD.
Ukutholakala noma ukusatshalaliswa kwezithombe zezingane ezivusa ucansi akuvumelekile. Uma uzithola ubuka lezi futhi ukhathazekile, xhumana nosizo Misa manje! Usizo lwe-Helpline noma Lucy Faithfull Foundation. Noma ungahlosile ukuhlangana nengane ngenhloso yokuxhumana ngokocansi, ukuba nezithombe kuphela kungaholela ekuvakasheni kwamaphoyisa. Xhumana nalezi zinhlangano ezisiza umphakathi uma usuvele uthintwe ngamaphoyisa.
<< Ukubuyisela i-Porn Imboni Yezocansi >>